နှလုံးသှေးကွောကယျြသူတှအေတှကျ နတျဆေးလိုစှမျးတဲ့ စကားစိမျး – Daily Feed MM
Admin_John | November 20, 2020 | Healthy | No Comments
အပှငျ့ကစ တဈပငျလုံးအစိမျး ရောငျရှိတဲ့ ပငျစောကျမြိုးပါ – စကားဖွူ. စကားဝါတို့နဲ့ မြိုးရငျးခငျြး မတူပါ. ပှငျ့ဖူးစကတညျး ကအပှငျ့အဂါင်္မြားစုံလငျပမေယျ့ မမှေးပါ ။တဖွညျးဖွညျး ရငျ့လာပွီး ပှငျ့ဖတျကလေးတှေ ဝါဖနျ့ဖနျ့ ဖွဈလာ
ရငျတော့ ပွငျးရှတဲ့ရနံ့နဲ့ ကလူ မွူပါတော့တယျ ။ဒါပမေယျ့ ပနျးကလေးရဲ့ ကံခခေကျြက အိမျတှငျးနတျမောငျနှမနဲ့ အထုံပါ လာတော့နတျယုံသူ အမြားစုကပနျ ကွဖို့ နနေသောသာ အိမျထဲ ယူရငျတောငျ နတျမကွိုကျဘူး ပွနျယူသှား
လို့ ကွိမျးမောငျးခံရသတဲ့ ။ဒါပမေယျ့ နှဈသကျသူတှကေတော့ ပနျလို့ နမျးလို့ နှမျးညိုလာရငျ. နမျးရိူကျနတေဲ့ ပနျးကလေးဟာ ရနံ့ မပွယျ သေးလတေော့ နှမွော တသ စှာနဲ့ မပဈရကျပဲ အုနျးဆီ ပုလငျးထဲမှာ. စိမျပွီး ဆံပငျ လူး
ကွတဲ့အခါ. ပိုမိုမှေးပြံ့ ကွလို့ ကွညျးနူးကွပါရဲ့ ။ နတျယုံကွညျသူမြားကတော့ မယုံရဲ ယုံရဲ မလုံ မလဲနဲ့ ပနျးမှ မပနျတာဆိုပွီး ပနျးစိမျထားတဲ့ အုနျးဆီ မှေးကိုယူ လူးကွရငျး လကျဖဝါးမှာ ဆီကပျကနျြခဲ့တဲ့ ပနျးရနံ့ကို ပှတျခပြွေီးနမျး
လို့ကို မဝ နိုငျပဘေူးတဲ့လေ ။ဩျော …ပနျးကလေး စကားစိမျး။စကားစိမျးပနျးဆေးဖကျဝငျပုံ ။ နှလုံးသှေး ကွောကယျြ ရောဂါ –စကားစိမျးပှငျ့ လကျတဈဆုပျကို ရေ ၃ ခှကျ ၁ခှကျတငျ ကြိုသောကျပါ-လကျဖကျရညျ အခြို ပုဂံ ၄
လုံး စာမြှ ကနျြအောငျ မှနျးထညျ့၍ တဈနလြေှ့ငျ မနကျ ည ၂ ကွိမျ ( ၁ ကွိမျလြှငျ အခြိုပုဂံ ၁ လုံးမြှ ၂ ရကျ ဆကျ၍ တိုကျပါ – ၂ ပတျကွာလြှငျ ရောဂါ ပြောကျကငျးသှားမညျ ။ နက်ခတ်တရောငျခွညျမဂ်ဂဇငျး
အပွင့်ကစ တစ်ပင်လုံးအစိမ်း ရောင်ရှိတဲ့ ပင်စောက်မျိုးပါ – စကားဖြူ. စကားဝါတို့နဲ့ မျိုးရင်းချင်း မတူပါ. ပွင့်ဖူးစကတည်း ကအပွင့်အဂါင်္များစုံလင်ပေမယ့် မမွှေးပါ ။တဖြည်းဖြည်း ရင့်လာပြီး ပွင့်ဖတ်ကလေးတွေ ဝါဖန့်ဖန့် ဖြစ်လာ
ရင်တော့ ပြင်းရှတဲ့ရနံ့နဲ့ ကလူ မြူပါတော့တယ် ။ဒါပေမယ့် ပန်းကလေးရဲ့ ကံခေချက်က အိမ်တွင်းနတ်မောင်နှမနဲ့ အထုံပါ လာတော့နတ်ယုံသူ အများစုကပန် ကြဖို့ နေနေသာသာ အိမ်ထဲ ယူရင်တောင် နတ်မကြိုက်ဘူး ပြန်ယူသွား
လို့ ကြိမ်းမောင်းခံရသတဲ့ ။ဒါပေမယ့် နှစ်သက်သူတွေကတော့ ပန်လို့ နမ်းလို့ နွမ်းညိုလာရင်. နမ်းရိူက်နေတဲ့ ပန်းကလေးဟာ ရနံ့ မပြယ် သေးလေတော့ နှမြော တသ စွာနဲ့ မပစ်ရက်ပဲ အုန်းဆီ ပုလင်းထဲမှာ. စိမ်ပြီး ဆံပင် လူး
ကြတဲ့အခါ. ပိုမိုမွှေးပျံ့ ကြလို့ ကြည်းနူးကြပါရဲ့ ။ နတ်ယုံကြည်သူများကတော့ မယုံရဲ ယုံရဲ မလုံ မလဲနဲ့ ပန်းမှ မပန်တာဆိုပြီး ပန်းစိမ်ထားတဲ့ အုန်းဆီ မွှေးကိုယူ လူးကြရင်း လက်ဖဝါးမှာ ဆီကပ်ကျန်ခဲ့တဲ့ ပန်းရနံ့ကို ပွတ်ချေပြီးနမ်း
လို့ကို မဝ နိုင်ပေဘူးတဲ့လေ ။ဩော် …ပန်းကလေး စကားစိမ်း။စကားစိမ်းပန်းဆေးဖက်ဝင်ပုံ ။ နှလုံးသွေး ကြောကျယ် ရောဂါ –စကားစိမ်းပွင့် လက်တစ်ဆုပ်ကို ရေ ၃ ခွက် ၁ခွက်တင် ကျိုသောက်ပါ-လက်ဖက်ရည် အချို ပုဂံ ၄
လုံး စာမျှ ကျန်အောင် မှန်းထည့်၍ တစ်နေ့လျှင် မနက် ည ၂ ကြိမ် ( ၁ ကြိမ်လျှင် အချိုပုဂံ ၁ လုံးမျှ ၂ ရက် ဆက်၍ တိုက်ပါ – ၂ ပတ်ကြာလျှင် ရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားမည် ။ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်း
သှေးတိုးရောဂါကို အမွဈပွတျစတေဲ့ ဟငျးတဈခှကျ